Kim Bok-Joo လေး ပြောပြတဲ့ ဝင်းမွတ်ပြောင်လက်ပြီး glow နေတဲ့ အသားအရေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် - For her Myanmar
Beauty, Celebrity News, Tips
Glow ချက်ဆိုတာလေ… ကြည့်တိုင်း အားကျရမိသောပါပဲ…
“Weight-lifting fairy Kim Bok Joo” ကြည့်တုန်းက မင်းသမီးရဲ့ အသားအရေကိုကြည့်ပြီး တအားကို အားကျမိတာပဲ ယောင်းတို့ရေ။ မပြင်မဆင်ရုပ်နဲ့ အားကစားသမားစတိုင် ဖမ်းထားတာတောင် အသားအရေကတော့ ဝင်းမွတ်နေရော။ ဒီတစ်ကားတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းမှာရော၊ အပြင်မှာပါ သူ့အသားအရေက လုံးဝ ပြစ်မျိုး မှဲ့မထင်မို့ လူတိုင်းက သူ့ရဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်ကို စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့။ အိမွန်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲမို့ သူ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ လေ့လာရင်း ယောင်းတို့ကိုပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
သူ့ရဲ့ beauty tips လေးတွေက ပုံမှန်ကိုယ်တွေ လုပ်နေကျလိုပါပဲ။ မျက်နှာသစ်ဆေးကနေ အစချီပြီး body lotion ၊ မိတ်ကပ် ၊ emulsion စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် သွားတာတွေချည်းပဲ။ အဲ… ကွာသွားတာက သူသုံးတဲ့ brand အမျိုးအစားရယ် သူပိုပြီး အလေးပေးလိုက်တဲ့ အချက်တွေက သူ့ရဲ့ beauty secret ဖြစ်သွားတာ။
Lee Sung Kyung ရဲ့ အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ နေရောင်ခံ ခရင်(မ်) မလိမ်းဘဲ ဘယ်တော့မှ အပြင်မထွက်တာပါဘဲ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က အသားအရေကို ဖျက်စီးတော့ ရှိရင်းစွဲ ရုပ်ရည်ထက် ပိုရင့်သွားစေတယ်လေနော်။ ဒါကို အဓိကထားပြီး ကာကွယ်လိုက်တော့ သူ့အသားအရေ ဒီလောက်လှနေတာ ဘာဆန်းတော့မှာလဲလို့… နောက်ပြီး လန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေရအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ပါသေးတယ်တဲ့။
နောက်တစ်ချက်က Skincare …ဒါက အရမ်း အရေးကြီးတော့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်လို့ သူလေးက ဆိုပြန်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြည့်အောင် နေပြီး ရေဓာတ်ပါတဲ့ ခရင်မ်တွေလိမ်းတယ်။ တစ်နေကုန် မိတ်ကပ်ခံဖို့ toner ကောင်းကောင်းကိုလည်း သုံးပါတယ်တဲ့။ ဒါများ ဘာထူးဆန်းလို့လဲနော်.. ကိုယ်တွေလည်း လိမ်းတာပဲကို သူ့လောက် လှမလာတာပဲ ရှိတယ် T.T အဲဒီမှာ ကွာသွားတာက စိတ်ရှည်မှုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
Related Article>>>နင်…… Messi ကိုကြိုက်လား?
ဆန်ကျန်းရဲ့ မျက်နှာ အသားအရေကို ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး မိတ်ကပ်တွေကြာရှည်ခံရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်တာပါတဲ့။ “တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာ ထပ်မလိမ်းခင် skincare နဲ့ မိတ်ကပ် သေချာလေး ရောသမသွားဖို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်တယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ တစ်လွှာလိမ်းပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ပါးပေါ်မှာ လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့ တို့ပြီး စမ်းကြည့်တယ်။ စိုနေသေးတယ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်လောက် ဆက်ထားပြီး နည်းနည်းခြောက်သွားမှ နောက်တစ်မျိုး လိမ်းတယ်”လို့ သူ(မ)က ပြောပြသွားပါသေးတယ်ယောင်းတို့ရေ…
နောက်ပြီး ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လက်ဖဝါးပေး မျက်နှာတင်ပြီး မနေပါနဲ့လို့လည်း မှာသွားပါသေးတယ်။ ဘာလို့ပါလိမ့်? လက်ဖဝါးပေါ် မျက်နှာတင်ပြီး နေတာများတဲ့အခါ မျက်နှာကျအနေအထားက ပြောင်းသွားနိုင်လို့ပါတဲ့.. အဲ့လို လက်ဖဝါးပေါ် မျက်နှာတင်ပြီး နေမယ့်အစား လက်ဖဝါးပေါ် လည်ပင်းလေးတင်ပြီး နေကြည့်ပါတဲ့…
ပါးအို့လေးတွေ အမြဲရဲပြီး လှနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ Lip tint လေးတွေကို ပါးပေါ်တင်ပြီး သုံးတာပါတဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဒီလိုတင်ပြီး သုံးတဲ့အခါ မိတ်ကပ်ပျက်သွားသည့်တိုင် နှုတ်ခမ်းနီက အသားပေါ် စွဲကျန်နေတတ်လို့ သဘာဝကျကျလေး လှနေတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့မျက်နှာလေးကို V-shape ဖြစ်လာအောင်တော့ မျက်နှာကို detoxify လုပ်ပါတယ်တဲ့နော်…
ကဲ..ဒါလေးတွေကတော့ အိမွန်ရှာလို့ ရသလောက် ဆန်ကျန်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေပေါပဲ… အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင် ရေဓာတ်ပြည့်အောင်နေ၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်၊ Skincare ကို စိတ်ရှည်ရှည်လေး သုံးပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေမယ့် Massage နဲ့ Detoxify လုပ်တာတွေလို့ ဆိုရမှာပေါ့… ယောင်းတို့အတွက်လည်း ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်…
ယောင်းတို့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေရှိရင်လည်း မျှဝေပေးပါဦးလို့…
Reference:candymag, femalemag, aminoapps,herworld
Glow ခကျြဆိုတာလေ… ကွညျ့တိုငျး အားကရြမိသောပါပဲ…
“Weight-lifting fairy Kim Bok Joo” ကွညျ့တုနျးက မငျးသမီးရဲ့ အသားအရကေိုကွညျ့ပွီး တအားကို အားကမြိတာပဲ ယောငျးတို့ရေ။ မပွငျမဆငျရုပျနဲ့ အားကစားသမားစတိုငျ ဖမျးထားတာတောငျ အသားအရကေတော့ ဝငျးမှတျနရေော။ ဒီတဈကားတညျးမှ မဟုတျပါဘူး။ သူသရုပျဆောငျတဲ့ ဇာတျကားတိုငျးမှာရော၊ အပွငျမှာပါ သူ့အသားအရကေ လုံးဝ ပွဈမြိုး မှဲ့မထငျမို့ လူတိုငျးက သူ့ရဲ့ အသားအရထေိနျးသိမျးနညျး လြှို့ဝှကျခကျြကို စိတျဝငျစားကွတာပေါ့။ အိမှနျလညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပဲမို့ သူ့လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှေ လလေ့ာရငျး ယောငျးတို့ကိုပါ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…
သူ့ရဲ့ beauty tips လေးတှကေ ပုံမှနျကိုယျတှေ လုပျနကေလြိုပါပဲ။ မကျြနှာသဈဆေးကနေ အစခြီပွီး body lotion ၊ မိတျကပျ ၊ emulsion စသဖွငျ့ အဆငျ့ဆငျ့ သှားတာတှခေညျြးပဲ။ အဲ… ကှာသှားတာက သူသုံးတဲ့ brand အမြိုးအစားရယျ သူပိုပွီး အလေးပေးလိုကျတဲ့ အခကျြတှကေ သူ့ရဲ့ beauty secret ဖွဈသှားတာ။
Lee Sung Kyung ရဲ့ အဓိက လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ နရေောငျခံ ခရငျ(မျ) မလိမျးဘဲ ဘယျတော့မှ အပွငျမထှကျတာပါဘဲ။ ခရမျးလှနျရောငျခွညျက အသားအရကေို ဖကျြစီးတော့ ရှိရငျးစှဲ ရုပျရညျထကျ ပိုရငျ့သှားစတေယျလနေျော။ ဒါကို အဓိကထားပွီး ကာကှယျလိုကျတော့ သူ့အသားအရေ ဒီလောကျလှနတော ဘာဆနျးတော့မှာလဲလို့… နောကျပွီး လနျးဆနျးတဲ့ အသားအရရေအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး လုပျပါသေးတယျတဲ့။
နောကျတဈခကျြက Skincare …ဒါက အရမျး အရေးကွီးတော့ သခြောလေး ဂရုစိုကျဖွဈတယျလို့ သူလေးက ဆိုပွနျပါတယျ။ ရဓောတျပွညျ့အောငျ နပွေီး ရဓောတျပါတဲ့ ခရငျမျတှလေိမျးတယျ။ တဈနကေုနျ မိတျကပျခံဖို့ toner ကောငျးကောငျးကိုလညျး သုံးပါတယျတဲ့။ ဒါမြား ဘာထူးဆနျးလို့လဲနျော.. ကိုယျတှလေညျး လိမျးတာပဲကို သူ့လောကျ လှမလာတာပဲ ရှိတယျ T.T အဲဒီမှာ ကှာသှားတာက စိတျရှညျမှုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article>>>နငျ…… Messi ကိုကွိုကျလား?
ဆနျကနျြးရဲ့ မကျြနှာ အသားအရကေို ထိထိရောကျရောကျထိနျးသိမျးပေးနိုငျပွီး မိတျကပျတှကွောရှညျခံရတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက စိတျရှညျရှညျ စောငျ့တာပါတဲ့။ “တဈလှာပွီးတဈလှာ ထပျမလိမျးခငျ skincare နဲ့ မိတျကပျ သခြောလေး ရောသမသှားဖို့ စိတျရှညျလကျရှညျ စောငျ့တယျ။ မကျြနှာပျေါမှာ တဈလှာလိမျးပွီးပွီ ဆိုတာနဲ့ ပါးပျေါမှာ လကျညှိုးထိပျလေးနဲ့ တို့ပွီး စမျးကွညျ့တယျ။ စိုနသေေးတယျဆိုရငျ တဈမိနဈလောကျ ဆကျထားပွီး နညျးနညျးခွောကျသှားမှ နောကျတဈမြိုး လိမျးတယျ”လို့ သူ(မ)က ပွောပွသှားပါသေးတယျယောငျးတို့ရေ…
နောကျပွီး ဘာမှ လုပျစရာမရှိတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ လကျဖဝါးပေး မကျြနှာတငျပွီး မနပေါနဲ့လို့လညျး မှာသှားပါသေးတယျ။ ဘာလို့ပါလိမျ့? လကျဖဝါးပျေါ မကျြနှာတငျပွီး နတောမြားတဲ့အခါ မကျြနှာကအြနအေထားက ပွောငျးသှားနိုငျလို့ပါတဲ့.. အဲ့လို လကျဖဝါးပျေါ မကျြနှာတငျပွီး နမေယျ့အစား လကျဖဝါးပျေါ လညျပငျးလေးတငျပွီး နကွေညျ့ပါတဲ့…
ပါးအို့လေးတှေ အမွဲရဲပွီး လှနရေတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ Lip tint လေးတှကေို ပါးပျေါတငျပွီး သုံးတာပါတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဒီလိုတငျပွီး သုံးတဲ့အခါ မိတျကပျပကျြသှားသညျ့တိုငျ နှုတျခမျးနီက အသားပျေါ စှဲကနျြနတေတျလို့ သဘာဝကကြလြေး လှနတေတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူ့မကျြနှာလေးကို V-shape ဖွဈလာအောငျတော့ မကျြနှာကို detoxify လုပျပါတယျတဲ့နျော…
ကဲ..ဒါလေးတှကေတော့ အိမှနျရှာလို့ ရသလောကျ ဆနျကနျြးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှပေေါပဲ… အနှဈပွနျခြုပျရရငျ ရဓောတျပွညျ့အောငျနေ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျ၊ Skincare ကို စိတျရှညျရှညျလေး သုံးပေးပွီး သှေးလညျပတျမှုကောငျးစမေယျ့ Massage နဲ့ Detoxify လုပျတာတှလေို့ ဆိုရမှာပေါ့… ယောငျးတို့အတှကျလညျး ဒီနညျးလမျးလေးတှကေ အဆငျပွမေယျလို့ ထငျပါတယျနျော…
ယောငျးတို့ လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှရှေိရငျလညျး မြှဝပေေးပါဦးလို့…
Tags: Beauty, cele, Cele News, Kim Bok Joo, korean, Lee Sung Kyung, secrets, tips